Ukuthenga le "yensimbi ihhashi", akubona bonke abashayeli ecabanga lapho yokulala njengoba imoto yabo. Abaningi yalibeka amafasitela abantu bambuke bemangele buthule ngemuva kwesihenqo, noma kuvulandi. Ezinye ukudonsa eduze umnyango, ukuvala ukudlula bese siphazamisa omakhelwane. Yiqiniso, into elungile uxoshe imoto emgwaqweni ikhokhwe yokupaka, lapho yena uyolala ebusuku ngokuphephile nangokuvikeleka ngaphansi kwesivikelo elibukhali onogada. Enye - ukuthenga indlu imoto yakho, ngisho noma kuyinto igobolondo ezishibhile, kodwa Kuxhomeke isikhathi, kodwa manje kufanele ulandele noma iplatifomu phambi kwezindlu.
Enye egalaji - yokupaka egcekeni. ngakho umthetho lingumthetho zokupaka, inikeza abanye enqabelo ethize kakhulu lapho sokwephulwa kwe esithola esihle.
Isikhathi esining impela kukhona isimo lapho ephezulu liphumele abahlala bayathukuthela ukuthi ngenxa izimoto emile egcekeni, akukho kungenzeka ukuhamba nengane ukuthutha. Ngaphezu kwalokho, kukhona izimoto, ogama abanikazi ngibashiye ishiywa isiphetho sabo ngosuku noma ngenyanga, kodwa iminyaka, indiva imibono yabanye. Yiqiniso, izinkinga ezashiywa isikhathi kakhulu kunazo anjalo kumele ukubhekana Amahhovisi izindlu kanye, esimweni okubi kakhulu ukuthi lesi simo siyaphuthuma - namaphoyisa omasipala.
Namuhla yokupaka kwesokudla emgwaqweni inikeza imithetho ngokwanele elula, engatholwa hhayi kuphela ukugwema amahlazo nge sihlala ndawonye futhi abasebenzi ngezidingo, kodwa futhi encane, kodwa namanje inhlawulo edabukisayo. Mangisho ukuthi, uma umshayeli ehluleka ukuphendula izixwayiso eziphindaphindiwe, ngolunye usuku ungase uthole ukuthi imoto yakhe wathatha iloli donsa. Futhi impendulo ngokuphelele esizwakalayo ezibalulekile emphakathini.
It akuvunyelwe nakancane ukupaka egcekeni e flowerbeds noma utshani. Ngoba nakanjani yayiyoba kufanele ukhokhe inhlawulo. Ngaphezu kwalokho, kocingo akuvunyelwe uhambo yokupaka egcekeni, kanye nalezo zindawo lapho imoto, ngisho noma kuyinto imoto icwecwe, ungakha noma iyiphi izithiyo ukunyakaza kwemishini noma umsebenzi. Ngokwesibonelo, ngesikhathi iloli udoti ayikwazi ikhiyiwe noma imishini iqhwa.
Ngaphansi ezithile izakhiwo ephezulu liphumele babe izitolo namahhovisi, Ngakho-ke, angeke anganakwa futhi umsebenzi wabo. Yokupaka egcekeni inikeza yokupaka buqamama akukho eduze kuka amamitha ayishumi kusukela emnyango inkonzo, okuyothi ngalo ukulayisha noma ukulayisha kwezimpahla.
Kuyinto ngokuvamile kungenzeka bagcine isithombe uma abasebenzi ZhEKov ukuvakashela imizi ukunikeza izakhamuzi eziningi kakhulu izikhalazo futhi wenze amaphuzu abanikazi nobuqotho izimoto. Ngokuvamile okungalungile emgwaqweni yokupaka kubangela idrayivu amaphoyisa womgwaqo, kanye olandelwayo.
Ukuze ugweme zonke lezi zimo futhi kokuhlupheka ezingadingekile, lesifanele isebenze ngokomthetho. Phela, kuphela lapho khona kwemibhalo ukugunyazwa kusuka kumnikazi we yokupaka imoto egcekeni akuyona inkinga.
Uma umnikazi wemoto futhi umnikazi wendlu efulethini eliphezulu liphumele, it has amalungelo athile ezweni layo. Kuyadingeka ukuba ubambe umhlangano abahlali, umeme bezitolo nezinye izinhlangano elise endlini, bahlelekela umbiko isinqumo ukuhlela yokupaka egcekeni. Lo mbhalo kuyadingeka ukwethula emkhandlwini wabo wesigodi. Ukuze lokhu kufanele kuhambisane isitatimende esibhaliwe, noma ngayiphi indlela, okuzokwenza abonisa inkolelo yokuthi kungani kudingeka yokupaka egcekeni.
Kwakufana iPhone lokuqala: mini-ukubuyekeza of Legends
Ukubhujiswa - Iyini? Izinhlobo nokucekelwa nezici zabo
Uwoyela Apricot izinwele: isicelo nomphumela